विद्यालयको जग्गा ठेक्कामा भद्रगोल ! (भिडियो) - The Public Today
विद्यालयको जग्गा ठेक्कामा भद्रगोल ! (भिडियो)
२८ जेष्ठ २०७७, बुधबार ०८:३०
ढल्केवर, जेठ २८ गते । धनुषाको मिथिला नगरपालिका वडा नम्वर ६ ढल्केवरस्थित रहेको महेन्द्र माध्यमिक विद्यालयको नाममा रहेको जग्गाहरुमा अनियमितता भइरहेको रहस्य बाहिरिएको छ ।
विद्यालयको नाममा रहेको जग्गाहरुमा सिमिति व्यक्तिले रजाइ गरिरहेको रहस्य सार्वजानिक भएको हो ।
वि.सं २०१६ सालमा स्थापित यो विद्यालयको नाममा जम्मा ५५ विघ्घा जग्गा कायम रहेको छ । विद्यालयको जग्गाहरुको भद्रगोल अवस्था भएपछि अहिले तनाव उत्पन्न भएको छ ।
शिक्षा नियामवली २०५९ अनुसार विद्यालयको नाममा रहेको सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने प्रमुख दायित्व व्यवस्थापन समिति र प्रधानाध्यापकको हुन्छ । तर विद्यालयको सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने प्रमुख दायित्व रहेको निकायकै मिलोमतोमा विद्यालयको जग्गामा चलखेल भइरहेको रहस्य सार्वजानिक भएको छ ।
महेन्द्र माध्यमिक विद्यालयको नाममा रहेको जग्गा मध्येको साविकको ढल्केवर गाविस वडा नं ६ग को किता नम्वर ३५ र वडा नं ७क को किता नम्वर ३७ को क्षेत्रफल करिव चार विघ्घा जग्गा २०७४ सालमा अपि पावर नामक कम्पनीलाई ३० वर्षसम्मको लागि ठेक्कामा दिएको छ । ठेक्का बापत प्रतिवर्ष १ लाख ६० हजार दिने गरि विद्यालय र उक्त कम्पनीबीच सम्झौता भएको बताइएको छ ।
अपि पावर कम्पनीलाई जग्गा ठेक्का दिएको तिन वर्ष भएको छ । कुनै बारणवस ती कम्पनीले विद्यालयसंग ठेक्का लिएको जग्गामा अहिलेसम्म काम सुरु गरेको छैन । ठेक्कामा लिएको तीनवर्ष वितेपनि उक्त कम्पनीले ठेक्का बापतको एकवर्षको रकम मात्रै विद्यालयलाई भुक्तानी गरेको छ । दुईबर्षको रकम अझै बाँकी छ ।
विद्यालयले जग्गा ठेक्का सम्झौता गरेअनुसार ठेक्काको समयावधी बाँकी रहेकै अवस्थामा अहिले विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षले नै उक्त जग्गामा उपभोग गर्न शुरु गरेका छन् ।
विद्यालयको नाममा रहेका जग्गामा चलखेल भएको कुरा बाहिरिएपछि स्थानिय युवाहरु आक्रोशित बनेका छन् । ढल्केवरस्थित रहेको मिथिला व्याडमिन्टन क्लबका युवाहरुले सार्वजानिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नुपर्ने भन्दै चासो देखाएका छन् ।
उनीहरुले विद्यालयको नाममा रहेको साविकको ढल्केवर गाविस वडा नं ६ग को किता नम्वर ३५ र वडा नं ७क को किता नम्वर ३७ को क्षेत्रफल करिव चार विघ्घा जग्गामा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षले नै रजाइ गरिरहेको आरोप लगाएका छन् ।
क्लवका युवाहरुले महेन्द्र माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक रामकुमार महतोलाई भेटेर विद्यालयको जग्गाको सुरक्षा गर्नुपर्ने भन्दै चासो देखाएका हुन् । प्रधानाध्यपकले विद्यालयको जग्गाको सुरक्षा गर्न नसकेको भन्दै उनीहरुले प्रअप्रति आक्रोश पोखेका थिए ।
विद्यालयका प्रधानाध्यापक रामकुमार महतोले आर्थिक चलखेल गरि विद्यालयको जग्गा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षलाई ठेक्कामा दिएको हुनसक्ने स्थानीय युवा सर्वनाथ महतोले आरोप लगाए । उनले व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षलाई प्रक्रिया नै नपुगाई मौखिक ठेक्का दिएको विद्यालयको जग्गा अविलम्ब फिर्ता हुनुपर्ने अडान राखेका छन् । ठेक्काबापतको बाँकी बक्यौता रकमहरु तत्कालै असुल उपर गर्न पनि उनले प्रधानाध्यपकलाई आग्रह गरेका छन् ।
विद्यालयका प्रधानाध्यापक रामकुमार महतोले विद्यालयको नाममा रहेको सो जग्गा क्षणिक दिनको लागि विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षलाई ठेक्कामा दिएको स्वीकार गरेका छन् । उनले यो विषयमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको भने कुनै निर्णय नभएको पनि स्वीकारे ।
‘विद्यालयले त्यो जग्गा ३० वर्षसम्मको लागि सोलार पावर कम्पनीलाई ठेक्का दिएको छ । ठेक्का दिएको तीनवर्ष भयो । कम्पनील भने अहिलेसम्म एकवर्षको रकम मात्रै दिएको छ । दुईबर्षको अझै बाँकी छ ।’ ठेक्कामा दिइसकेको जग्गालाई कतिपटक ठेक्का लगाउने, प्रधानाध्यापक महतोले भने कम्पनीले पैसा नदिएपछि क्षणिक दिनको लागि विद्यालयलाई थप आम्दानी हुने उद्धेश्यले अध्यक्षलाई जिम्मा दिएको बताए । त्यसबात अध्यक्षले प्रतिकठ्ठा सातसयको दरले विद्यालयलाई भुक्तानी गर्ने सहमती भएको प्रअ महतोले बताए ।
विद्यालयका सहायक प्रधानाध्यापक हरिदेव महतोले सार्वजानिक सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न युवाहरुले आवाज उठाउनु सकारात्मक पक्ष रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
यता विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सत्रुधन साहले विद्यालयको जग्गा आफूले ठेक्कामा नलिएको बताएका छन् । विद्यालयको नाममा रहेको सो जग्गा अपि पावर कम्पनीले २०७४ सालमा ३० वर्षसम्मको लागि लिजमा लिइसकेको प्रतिक्रिया दिए ।
‘प्राविधिक कारणवश कम्पनीले सो जग्गा काम शुरु गर्न सकेको छैन अध्यक्ष साहले भने, अपि पावर कम्पनीकै मौखिक सहमतिको आधारमा हामीले एक वर्ष अर्थात एक बालीको लागि जग्गामा उपभोग गरेका हौं।’ त्यस बापत जग्गा नापेर प्रति कठ्ठा सातसयको दरले आफूले विद्यालयको आम्दानीमा जम्मा गर्ने अध्यक्ष साहले स्पष्ट पारे ।
अपि पावर कम्पनीले ठेक्का लिएको तीन वर्ष वितेपनि एकवर्षको भुक्तानी मात्रै गरेकोले बाँकी रकम पनि छिट्टै असुल उपर गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । कम्पनीले बाँकी रकम भुक्तानी नगरे अदालत प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने उनले बताए । आजको द पब्लिक टुडे दैनिकमा समाचार छ ।